Hotspot Shield Free VPN Proxy & Secure VPN အက်ပလီကေးရှင်းကိုဒေါင်းလုပ် 2021 - အခမဲ့ - 9Apps
ဒေါင်းလုပ် XAPK（31.4MB） ယခင်ဗားရှင်း
၏ဖော်ပြချက် Hotspot Shield Free VPN Proxy & Secure VPN
"သင်၏အွန်လိုင်းမှတ်ပုံတင်ကိုဖုံးကွယ်ပြီးပိတ်ဆို့ထားသောအက်ပ်များနှင့်ဆိုဒ်များကို Hotspot Shield ဖြင့် ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုပါ၊ သင်၏မိုဘိုင်းလှုပ်ရှားမှုများကိုလျှို့ဝှက်ပြီးလုံခြုံအောင်ထားပါ။
Hotspot Shield VPN Proxy သည်ယုံကြည်စိတ်ချရဆုံးသောလုံခြုံရေး၊ သီးသန့်တည်ရှိမှုနှင့်ထိပ်တန်းစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ချိတ်ဆက်မှု platform ဖြစ်သည်။ မြန်နှုန်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံမှု။ Hotspot Shield သည်စစ်မှန်သောအွန်လိုင်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပေးသည်။ ပထ ၀ ီကန့်သတ်ချက်များကိုကျော်လွှားပြီးမည်သည့်နေရာမှမဆိုကမ္ဘာ့အကြောင်းအရာများကိုထိပုတ်ပါရုံဖြင့်လုပ်နိုင်သည်။
⇨အဘယ်ကြောင့် Hotspot Shield ကို
သင်၏အသွားအလာအားလုံးကိုစာဝှက်ပြီးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာမီဒီယာ၊ ဗီဒီယို၊ စာတိုပေးပို့ခြင်းသို့မဟုတ်လူမှုရေးအက်ပ်များနှင့်ကွန်ယက်များသို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပါ။
သင်၏ IP လိပ်စာ၊ အမည်နှင့်တည်နေရာကို tracker များမှဝှက်။ အကောင်းဆုံးလုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုခံစားပါ။
အခြေခံကိုသုံးပါ အခမဲ့ (အစဉ်အမြဲ) စွမ်းဆောင်ချက်များ (သို့) အကန့်အသတ်မဲ့စွမ်းဆောင်နိုင်မှုများအတွက် Elite သို့အဆင့်မြှင့်တင်ပါ။
par ပြိုင်ဘက်ကင်းသော VPN စွမ်းဆောင်ရည်:
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်ဆာဗာများကသေချာစေသည် အမြန်ဆုံး VPN မြန်နှုန်း၊ တည်ငြိမ်မှုနှင့်လုံခြုံသောဆက်သွယ်မှုများ။
✓အကြီးမားဆုံး VPN လွှမ်းခြုံခြင်း:
Aura မှ Hotspot Shield သည်အမေရိကန်၊ ဗြိတိန်၊ JP၊ IN အပါအ ၀ င်နိုင်ငံပေါင်း ၂၀ မှ VPN လွှမ်းခြုံမှုကိုပေးသည်။ AU, CA, CN နှင့်အခြားအရာများ
Hotspot Shield သည်အသုံးပြုသူများနှင့်သူတို့၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုမည်သည့်မှတ်တမ်းမျှမမှတ်မိပါ။ သင်၏လုံခြုံမှုနှင့်လုံခြုံမှုကိုအာမခံထားသည်။
မည်သည့်မေးခွန်းများနှင့်အကြံပြုချက်များကိုမဆို [email protected] သို့အီးမေးလ်တစ်ခုသာရိုက်ပါ။ ကျေနပ်မှုကိုအာမခံသည်။
Hotspot Shield Free VPN Proxy ကိုအကြိမ်ပေါင်းသန်း ၄၀၀ ကျော်ထည့်သွင်းထားပြီး Forbes၊ CNET, CNN နှင့် New York Times တွင်ဖော်ပြခဲ့သည်။ ။
✓ Malware နှင့် Phishing Protection:
Hotspot Shield တွင် built-in malware နှင့် phishing ကာကွယ်မှုတို့ပါ ၀ င်သည်။ VPN ကိုရိုးရိုးလေးဆက်သွယ်လိုက်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်သံသယဖြစ်ဖွယ်ဆိုဒ်သို့လည်ပတ်လျှင်သင် Hotspot Shield သည်သင့်အားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးနှင့်သတိပေးလိမ့်မည်။
H Hotspot Shield မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်
Hotspot Shield VPN Proxy သည်သင်၏စက်နှင့်ပစ်မှတ်ဝက်ဘ်ဆိုက်အကြားစာဝှက်ထားသောချန်နယ်မှတဆင့်လုံခြုံပြီးယုံကြည်စိတ်ချရသောဆက်သွယ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသည်။ Virtual Private Network (VPN) နည်းပညာ။ သင်၏အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများကိုမည်သူတစ် ဦး တစ်ယောက်မှခြေရာခံ။ မရနိုင်စေရန်နှင့် firewalls များနောက်ကွယ်၌ပင်တားမြစ်ထားသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်ဝင်ရောက်နိုင်လိမ့်မည်၊ Hotspot Shield သည်သင်၏ IP လိပ်စာကိုသင်၏စက်ကိရိယာအမည်ဝှက်ရန်ဖုံးကွယ်ထားသည်။
Hotspot Shield VPN Proxy သည် လူတိုင်းအတွက်တည်ဆောက်ထားသည့် freemium ထုတ်ကုန် - သင်သည်အခြေခံအားဖြင့်ပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့်သီးသန့်လုံခြုံရေးအင်္ဂါရပ်များပါသောအခမဲ့ဗားရှင်းကိုရှာဖွေနေသည်ဖြစ်စေ၊ add-on ဝန်ဆောင်မှုများနှင့်အတူအဆင့်မြင့်သောဗားရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။
■ Hotspot Shield VPN အခြေခံဗားရှင်း
■ Hotspot Shield VPN ပရီမီယံဗားရှင်း
(အလိုအလျောက်သက်တမ်းတိုးပေးသော subscription option) သည်အမေရိကန်၊ ယူကေ၊ JP၊ IN၊ AU, CA၊ CN၊ , UA နှင့်မည်သည့်ကြော်ငြာပြတ်တောက်ခြင်းမရှိဘဲ။ ပရီမီယံအကောင့်များသည်စမတ်ဖုန်း၊ တက်ဘလက်၊ လက်တော့သို့မဟုတ်ကွန်ပျူတာဖြစ်ပါကပစ္စည်းငါးခုအထိထောက်ပံ့သည်။ လစဉ်သို့မဟုတ်နှစ်စဉ်ကြေးပေးသွင်းခြင်းကိုလက်မှတ်မထိုးခင် ၇ ရက်ကြာအခမဲ့စာမေးပွဲကိုရွေးချယ်နိုင်သည်။
Premium VPN စျေးနှုန်း:
■ ၁ လ subscription - $ 12.99 / month
■နှစ်စဉ်ကြေး - ဒေါ်လာ ၇.၉၉ / လ
VPN နည်းပညာအကြောင်းလေ့လာရန် - https://goo.gl / tgL10z
မူပိုင်ခွင့်© 2020 Aura, Inc. All Rights Reserved "
ဘာအသစ်လဲ Hotspot Shield Free VPN Proxy & Secure VPN 8.11.1
Md Tech Tricks
HotSpot Shield VPN Crack | HotSpot Shield VPN Register 2020 | AliBhattiTP
It's big problem for many advertise application. Help for users please.
Kaung Khant Lwin